Barcelona Oo Kalsooni Ku Qabta Inay Heshiis La Gaarto Eric Garcia Bishaan
HomeWararka Ciyaaraha MaantaBarcelona oo kalsooni ku qabta inay heshiis la gaarto Eric Garcia bishaan
April 15, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay ku kalsoontahay saxiixa Eric Garcia ka hor dhamaadka bisha.
20 jirkaan qandaraaska uu kula joogo Manchester City ayaa dhacaya dhamaadka bisha June, waxaana si weyn loo filayaa inuu si xor ah ugu laabto Camp Nou inkastoo ay xiiseynayaan Arsenal iyo Paris Saint-Germain .
Sida ay haatan tahay, Barca weli heshiis lama gaarin daafaca dhexe, kaasoo 10 kulan u saftay Citizens intii lagu jiray ololihii 2020-21.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Sport , kooxda reer Catalonia ayaa kalsooni ku qabta inay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga reer Spain ka hor dhamaadka bisha Abriil.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in kooxda Ronald Koeman ay dhawaan ku qasbanaatay inay dib u hagaajiso qandaraaskii ay u soo bandhigtay da ‘yarka sababo la xiriira dhibaatooyinka dhaqaale ee socda.
Garcia, oo markii hore ka tagay Barca 2017, ayaanan ciyaarin kulamo badan oo Man City ah tan iyo markii uu si cad u sheegay inuusan qandaraas cusub u saxiixin doonin.